ပန်းနုရောင် သွေးနေတဲ့ အလှလေးတွေနဲ့ ချစ် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ TIK TOK ဆော့ ထားတဲ့ ခန့် ရဲ့ ဗီဒီယို…. – Shwe Naung
ပန်းနုရောင် သွေးနေတဲ့ အလှလေးတွေနဲ့ ချစ် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ TIK TOK ဆော့ ထားတဲ့ ခန့် ရဲ့ ဗီဒီယို….
N N | June 26, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီး ချောလေး ခန့် ကတော့ အနုပညာ လောက မှာ အချိန်အတို တွင်းအောင်မြင် မှုတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးလျှောက်လှမ်း လာခဲ့တဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး ခန့် ဟာ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရင်း
ပရိသတ် တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာနေရာ တစ်ခုကို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ရိုးရှင်း အေးချမ်းတဲ့ အလှတရား တွေအပြင် ဖြူဖွေးနုဖက်နေတဲ့ အသားရည်လေးတွေနဲ့ တစ်မျိုးလေးချစ်စရာ ကောင်းနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုတွေကို လည်းရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး ချောလေး ခန့်ဟာ လတ်တလောမှာ ဆိုရင်လည်း ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အချိန် ကာလလေးမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ခဏရပ် နားထားခဲ့ရပြီး ချစ်ရတဲ့ သူတွေနဲ့အတူ အိမ်မှာပဲအနားယူ နေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အိမ်မှာနေတဲ့ အချိန် လေးမှာလည်း ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဝေးကွာမသွားအောင် မကြာခဏ ဆိုသလို အပျင်းပြေ ဆော့ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို လည်းဖော်ပြပေးလေ့ ရှိတာကိုလည်း တွေ့ပါတယ်။
ယခုတစ်ခါမှာ လည်း လွမ်းနေတဲ့ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် ချစ်စရာ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန် ယက်စာမျက်နှာ ပေါ်မှာတင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယို လေးထဲမှာလည်း လွတ်လပ် ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင် ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ထားကာ လတ်တလော tik tok မှာနာမည် ကြီးနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို နောက်ခဲ့ထားပြီး မတူညီတဲ့ အိုက်တင် လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုအောင် ဆော့ထားတဲ့ tik tok ဗီဒီယို လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးချောလေး ခန့် ရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို သဘောကျ ကြိုက်နှစ် သတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ကဲ..ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရင်ခုန် အသည်းစေ လာက်မယ့် ချစ်စရာ ကောင်းအောင် ဆော့ထားတဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ခန့်ရဲ့ tik tok ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဖော် ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖွေးဥနုနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ချပြနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဝင်းရွှေရည်သင်းရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ……..
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းနဲ့ အထာကျကျ လှပနေတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ………
ရင်ဖိုစရာ ကောက်ကြောင်း အလှတရားတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းပြင်း ညို့ယူဖမ်းစား ထားတဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………
ဆက်ဆီကျကျ ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ မိမိုက်နေတဲ့ နန်းဆုဦးရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး………..